အိမ်အပြင်ကနေ သရဲလိုလို သတ္တဝါတစ်ကောင်လှည့်ပတ်ပြီး သောင်းကျန်းခြောက်လှန့် နေတာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ CCTV ဗီဒီယိုဖိုင် - Myanmarload
အိမ်အပြင်ကနေ သရဲလိုလို သတ္တဝါတစ်ကောင်လှည့်ပတ်ပြီး သောင်းကျန်းခြောက်လှန့် နေတာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ CCTV ဗီဒီယိုဖိုင်
လွန်ခဲ့သော ၆ လ က 16:16 March 13, 2019
ကဲ.... တစ်ခုလောက်ဖြေကြည့်ပါဦး ပရိတ်သတ်ကြီးရေ။ ပရိတ်သတ်တို့ သရဲကြောက်တတ်ကြလား? .... ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျရင် မိန်းကလေးတွေကတော့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ကြောက်တတ်ရင်ကြောက်တတ်ကြောင်းပြောပေမယ့် အရမ်းကို သတ္တိရှိကြောင်းပြချင်ကြတဲ့ အာဂ ယောက်ျားလေးတော်တော်များများကတော့ မကြောက်ဘူးလို့ ဖြေကောင်းဖြေကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါကလည်း သူတို့တကယ့် သရဲ အစစ်ကိုမတွေ့ဖူးသေးလို့ပါလို့ ဆိုရမယ်။ တွေ့ဖူးတယ်ဆိုရင်တောင် တကယ့်သရဲမဟုတ်ဘဲ ထင်ယောင် ထင်မှားဖြစ်နေတဲ့အရာတစ်ခုလောက်ပဲ ဖြစ်မှာပါ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ တကယ့်သရဲကိုအပြင်မှာတွေ့ဖူးလို့ကတော့ သရဲလုံးဝမကြောက်ပါဘူးဆိုတဲ့ အဖြေကို ဘယ်တော့မှဖြေမိကြမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျ။
ဒီသရဲဆိုတဲ အရာတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ ဘုရားဟောထဲမှာလည်း ပါသလို သက်သေအထောက်အထားပေါင်းများစွာကလည်း မယုံကြည်မှုဆိုတဲ့အရာတွေကို အရည်ဖျော်ချနေပါတယ်နော်။ သိပ္ပံပညာရှင် တွေရဲ့ လက်တွေ့နည်းအချို့ကလည်း တကယ့်တကယ်မှာ အလုပ်မလုပ်တဲ့အတွက် တော်ပါတယ် တတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပညာရှင်တွေလည်း လက်မြှောက်ထားခဲ့ရပါတယ်နော်။ ဒါကြောင့် ဖြေရှင်းလို့မရတဲ့ နာနာဘာဝတွေနဲ့ ပတ်သတ်နေတဲ့ မေးခွန်းပေါင်းများစွာဟာ အခုထိရှိနေဆဲပါပဲ။ ဒီ ပရလောကသားတွေနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ တကယ့်အစစ်အမှန်ဓာတ်ပုံ တွေ ဗီဒီယိုတွေလည်း ရှိခဲ့ ထွက်ပေါ်ခဲ့သလို အတုအယောင်တွေကလည်း နေရာအနှံ့ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ခုကတော့ CGIနဲ့လုပ်ထားတဲ့ သရဲဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျ။
ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့ CCTVမှတ်တမ်းကနေ ရယူထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာဆိုရင် အိန္ဒိယလူမျိုး တစ်ယောက်အိမ်နေတဲ့ အိပ်ခန်းထဲမှာတွေ့ရတဲ့ သတ္တဝါတစ်ကောင်(သို့)သရဲ ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပထမကတော့ အမျိုးမျိုးခြောက်လှန့်ပေမယ့် သရဲလို့ယူဆရတဲ့ အဆိုပါအကောင်နဲ့ လူနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ အိန္ဒိယ အမျိုးသားခမျာ ဖင်ထိုင်ရက်လဲကျပြီး ဖနောင့်နဲ့တင်ပါးတစ်သားတည်းကျအောင် အခန်းထဲကနေထွက်ပြေးသွားခဲ့ရတာကို ပရိတ်သတ်တွေတွေ့မြင်ရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် မေးခွန်းတွေတော့ အများကြီးကျန်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ ဒီအကောင်ဟာ သရဲလား?လူလား?တိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်ကောင်လား? သရဲဆိုရင်တောင် ဘာလို့အိမ်ထဲကိုမဝင်လာနိုင်တာလဲ? ပြတင်းပေါက်နားမှာထောင်ထားတဲ့ ဘုရားပုံတော်ကြောင့်လား? ကဲ.... ပရိတ်သတ်ကြီးလည်းသိရင် ဖြေသွားကြပါအုန်းနော်။
Page generated in 0.0344 seconds with5database query and6memcached query.